ललितपुर महानगरले संचालमा ल्यायो बीऊ एटिएम : कसरी पाइन्छ बीऊ ? | Sagarmatha TV
ललितपुर महानगरले संचालमा ल्यायो बीऊ एटिएम : कसरी पाइन्छ बीऊ ?
काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिकाले कौसी र करेसाबारी खेतीलाई लक्षित गर्दै पहिलो पटक बीउ एटियम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यही साता सञ्चालनमा आएको बीउ एटियम मेसिन हाल परक्षिणका लागि महानगरपालिका हाता मै राखिएको छ।
जहाँबाट तोकिएको शूल्क भुक्तानी गरेर चाहे अनुसारको तरकारीको बीउ लान पाईन्छ।
बढ्दो शहरीकरण, खुला खेती योग्य जमिन अभाव र महंगीका कारण शहरी क्षेत्रमा कौसी खेती गरेर जीविका चलाउन खोज्नेको संख्या बढीरहेको छ। यसैलाई प्रोत्साहन गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले नेपाल मै पहिलो पटक बीउ एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
कौसी खेतीप्रति लक्षीत् बीउ एटिएममा कौशीमा सजिलै खेती गर्न सकिने तरकारी तथा फलफूलको बीउ उपलव्ध छ। महानगरपालिकाले खुल्ला खेतिका लागि जमिन अभाव भइसकेकाले कौसी खेतीलाई मिल्नेगरी बीउ एटिएम स्रचालनमा ल्याएको जनाएको छ।
‘आधुनिक कृषि प्रविधि प्रयोग गरी, सामान्य तरीकाले फलफूल तथा तरकारी उत्पादन गर्न सकिने ३६ प्रकारका बीउ मेसिनमा राखिएकोे छ,’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबुमहर्जनले भने, ‘यो प्रविधिको उपयोगिता र प्रभाव हेरेर २९ वटै वडामा विस्तार गर्ने योेजनामा छौं।’
नौं लाख रुपैंया खर्च गरेर जडान गरिएको मेसिनबाट चाहे अनुसारको बीउ सजिलै पाईने भएपछि शहरी क्षेत्रका किसान खुशी भएका छन्। तर, ठूलो मात्रामा फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा निर्भर व्यवसायिक किसान भने यो मेशिनको पहुँंचमा आईपुगेका छैनन्।किन भने उनीहरुलाई एटिएमबाट प्राप्त हुने बीउले आवश्यकता धान्न सक्दैन।
थोरै उत्पादन गर्ने र घरायसी प्रयोजन मै खर्च हुने तरकारी किसान भने विश्वासीलो र शहरी वातावरण अनुकुलको बीउ पाइने एटिएमको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउछन्।
महानगरले प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको यो एटिएममा मौसमी तरकारीका बीउलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
काँक्रो, सिमी, तीतेकरेला, रायो, बन्दा, बोडी, काउली, मुला, गोलभेंडा, खोर्सानी लगायत ३६ प्रकारका बीउ एटिएममा पाईन्छ। यस्तै बीउ एटिएम मेसिनमा सुपारी, डेलिया, सूर्यमुखी, जलबेडा, सयपत्री लगायत फूलका बीउ समेत राखिएको छ।
जुन मेशीनबाट बीऊ पाउन स्कृनमा देखिएको अपसन टच गरी उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसले सर्वसाधारणलाई अझ बढि आकर्षित गरेको छ।